Amandla e-Dhamma: yintoni na, yenza ntoni kwaye zeziphi iiprojekthi ezinayo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
Amandla elanga akhuthazwa ngakumbi ziinkampani kunye neeprojekthi ezizama ukwenza le mandla ibe yinto ephuhliswe ngakumbi. Enye yeenkampani ezibheja ngamandla elanga yi Dhamma amandla. Iqela leDhamma Energy liphuhlisa, lakha kwaye lisebenzise izityalo zamandla elanga.
Kule nqaku siza kukuxelela ngembali ye-Dhamma yamandla, iiprojekthi ezibaluleke kakhulu kunye nendlela esebenza ngayo.
2 Iiprojekthi zamandla eDhama
3 Ubume kunye nenkxaso-mali ye-Dhamma yamandla
4 Ukuhanjiswa kweHydrojeni eSpain
5 Dhamma amandla kunye nokwakhiwa kwayo
Imisebenzi yeDhamma Energy eFransi naseSpain yafunyanwa ngo-Oktobha 2021 yi-Eni gas e luce, i-subsidiary ye-100% ye-Eni SpA. I-Dhamma Energy okwangoku ine-120 MWp isityalo samandla elanga eFransi.
I-Dhamma Energy yaqala ukusebenza eFransi naseSpain ngaphezu kweminyaka elishumi edlulileyo, apho iphuhlise iiprojekthi zayo zokuqala zelanga. Emva koko, I-Dhamma Energy yandisa imisebenzi yayo eFransi, apho yakha ipaki yayo yokuqala yelanga.
Kwi-2013, i-Dhamma Energy yavula i-subsidiary e-Mexico, eye yaphuhlisa i-470 MWp isityalo sombane welanga kwaye okwangoku inepotfoliyo ye-2 GWp. Okwangoku, iqela lisebenza kwiprojekthi yokuqala ye-photovoltaic e-Afrika, ipaki yelanga ye-2 MWp e-Mauritius, eyavulwa kwi-2015.
Ukuza kuthi ga ngoku, i-Dhamma Energy igqibe uphuhliso lwe-650 MW yezityalo zamandla e-photovoltaic, ezibekwe ikakhulu eMexico, eFransi nase-Afrika. I-Dhamma Energy okwangoku inombhobho we-2 GWp osebenzayo eMexico. Iqela leDhamma Energy lenziwe ngabaphathi beprojekthi, iinjineli kunye neengcali zobugcisa kwicandelo le-photovoltaic.
Iiprojekthi zamandla eDhama
Kule minyaka, ngamava abawafumeneyo, baye baba yinkokeli ezimeleyo ekuphuhliseni izityalo zamandla e-photovoltaic kunye nokuveliswa kwamandla elanga. Njengabaphuhlisi, abakhi, abaqhubi kunye nabatyali-mali bezityalo ze-photovoltaic, bagubungela umjikelo wobomi beprojekthi: ukusuka ekufuneni umhlaba ukuya ekugcinweni nasekulawuleni ipaki ye-photovoltaic.
Iqela libandakanya zonke izigaba zophuhliso lweprojekthi ye-solar PV, kubandakanywa izifundo ezinokwenzeka, uphando lwe-topographical, izifundo zokusingqongileyo, ukuvavanya indawo, iingcamango zokufakela, ukuvavanya kwezobugcisa, uhlalutyo lomgaqo-nkqubo kunye nommiselo, ukuba nokwenzeka kwemali, ukusekwa kokuthengwa kwamandla (PPA).
I-Dhamma Energy isebenzisana nabanikezeli bamazwe ngamazwe abaphambili (iimodyuli ze-photovoltaic, i-inverters, iinkqubo zokugcina). Enye yemimandla yomsebenzi weDhamma Energy kulawulo lokwakhiwa kweeprojekthi ze-photovoltaic. I-Dhamma Energy ikwakhapha amaqabane ayo otyalo-mali kude kube yinqanaba lokuqala leprojekthi.
Sebenza kunye neengcali kunye nabafaki abanamava abanzi kwintsimi. I-Dhamma Energy iphuhlise ngempumelelo kwaye yakha uphahla kunye neeprojekthi zelanga eziphantsi komhlaba ezisebenzayo ngoku.
Ubume kunye nenkxaso-mali ye-Dhamma yamandla
Esinye sezigaba eziphambili zeprojekthi kukwakhiwa kunye nokuxhasa ngemali. Kule nkampani yamandla elanga, banamava, ulwazi kunye nezakhono zokukhusela inkxaso-mali kunye nokukhusela inkxaso-mali eyimpumelelo kumaziko ombane elanga aphakathi namakhulu phantsi kwemimiselo eyahlukeneyo. Amava akhe aquka inkxaso-mali ye-equity kunye namatyala exesha elide kunye neebhanki zorhwebo kunye nemibutho yamazwe amaninzi.
Bathatha inxaxheba kumjikelo wobomi beprojekthi kwaye babeke esweni ukuqaliswa kwe oomatshini bamandla elanga kwaye bakuba befikelele kwinqanaba lokurhweba, baphuhlise kwaye basebenzise ezi projekthi. Ukuveliswa kwamandla elanga yinxalenye yoshishino.
Okwangoku banoluhlu lwezityalo zamandla elanga ezisebenzayo, kubandakanywa nezityalo eziphakathi kunye nezinkulu emhlabeni, kunye nezityalo eziphezu kophahla, ezibekwe ikakhulu eFransi.
Ukuhanjiswa kweHydrojeni eSpain
Ukusasazwa kwe-hydrogen eluhlaza kwiiprojekthi zaseYurophu kuya kuqala eSpain ngokuthatha inxaxheba kwe-Enagás, iNaturgy kunye neDhamma Energy. Iprojekthi ye-HyDeal Ambition ijolise ekuphuhliseni ikhonkco laseYurophu lokusasaza i-hydrogen eluhlaza ngamaxabiso akhuphisanayo eSpain, apho ukuveliswa kombane kuya kuqalisa kunyaka ozayo, kujoliswe kuko ngeemegawathi ezili-10 ngonyaka.
Imvelaphi yalo mthombo wamandla ahlaziyekayo kukuveliswa kwe-hydrogen eluhlaza ngokusebenzisa i-electrolysis yelanga, apho amaxabiso akhuphisanayo anokufezekiswa ngeprogram, eya kuthatha amanyathelo okuqala kwi-2022 kwaye ijolise ukufikelela kwi-85 GW yomthamo welanga kunye ne-67 GW. amandla elanga. iiwatts zokuvelisa amandla e-electrolytic ngo-2030.
Oku kubonisa i-3,6 yezigidi zeetoni ze-hydrogen eluhlaza ngonyaka, elilingana neenyanga ezimbini zokusetyenziswa kweoli eSpain, eziya kusasazwa ngokugcinwa kwegesi yendalo kunye nothutho lothutho lweenkampani ezithatha inxaxheba kweli nyathelo. Ixabiso kumthengi liqikelelwa kwi-1,5 EUR / kg, elithelekiseka nexabiso langoku lamafutha efosili kodwa, ngokubuyisela, alivelisi ungcoliseko.
Ukongeza kwiinkampani ezintathu zaseSpain i-Enegás, i-Naturgy kunye ne-Dhamma Energy, ezinye iinkampani ezinkulu ezivela kwezinye iindawo zaseYurophu nazo zithatha inxaxheba, njenge-Falck Renewables (eItali), i-Gazel Energie (eFransi), i-GTTGaz (eFransi), i-HDF Energie (eFransi) , Hydrogen de France , McPhy Energy (France), OGE (Jamani), Qair (France), Snam (Italiya), Teréga (France), Vinci Construction (France)... ukuya kuthi ga kwi-30 yeenkampani ezithatha inxaxheba. Ezi ziinkampani ezivela kumacandelo ahlukeneyo afana nophuhliso lwelanga, ukwenziwa kwezixhobo ze-electrolysis, ubunjineli, kunye nemali yeziseko zophuhliso kunye nabacebisi.
Dhamma amandla kunye nokwakhiwa kwayo
Kulo nyaka i-2021 ngenyanga kaMeyi, amandla e-Dhamma acele ugunyaziso lokufakelwa kombane kwiplanti ephezulu ebizwa ngokuba yi "Cerrillares I photovoltaic solar plant". Ukuphuhliswa kweprojekthi, eya kuba phakathi koomasipala baseJumilla naseYecla, imele utyalo-mali oluqikelelwayo lwe-30 yezigidi zee-euro, apho i-euro yezigidi ezingama-28 ihambelana nokufakelwa kombane ophantsi kwe-photovoltaic solar plant emhlabeni, ilandelwa ngokuthe tye kwi-axis enye.
Ngakolunye uhlangothi, i-euro ye-1 yezigidi iya kutyalwa kwimigca yokuhanjiswa kwangaphandle ukukhupha amandla awenziwe (i-12.617 yeemitha ubude) kunye ne-742.000 ye-euro kwizitishi. Ipaki yelanga iya kuhlala iihektare ezingama-95 kwaye, xa sele isebenza, iya kuvelisa i-97,5 GWh yombane ngonyaka. Le mveliso ilingana nokusetyenziswa kwemizi emalunga nama-30.000.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga neDhamma yamandla kunye neeprojekthi zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » amandla e-dharma
Indlela yokukhusela indlu ebusika ebusika?